အမျိုးသမီးများအတွက် စိတ်ခွန်အားတွေရရှိစေနိုင်မယ့် အိန္ဒိယဇာတ်ကား၎ကား
9 Jun 2018 . 2:50 PM
မိန်းကလေးတွေ အတွက်စိတ်ခွန်အားတွေကိုရရှိစေနိုင်မယ့် အိန္ဒိယဇာတ်ကား ၄ ကားကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားတစ်ခုစီအလိုက်ပေးချင်တဲ့ ဘဝသင်ခန်းစားတွေအရမ်းကောင်းတာမို့ ရုံးပိတ်ရက်လိုအားလပ်ရက်တွေမှာ ကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေမှာ ကိုယ်ပိုင်အရည်ချင်းတွေတစ်ယောက်တစ်မျိုးရှိတက်ပေမယ့်လည်း ဒီလိုအရာတွေဟာ တိမ်မြုပ်နေတက်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုဖော်ဆောင်ဖို့အတွက် က ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ တွန်းအားတစ်ခုလို သလိုအခက်အခဲတွေတွေ့လာမှ ပေါ်လာတက်တာတွေဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒီလိုဇာတ်ကားတွေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့  ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေကို ဘယ်လိုတွေ အသုံးချသင့်သလဲ ဆိုတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကွယ်လွန်သွားရှာပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးကြီးသျှရီဒေဝီ ရဲ့  အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ ဇာတ်ကားနှစ်ကားပါဝင်ပါတယ်။
Secrect Superstar (2017)
ဒီဇာတ်ကားကတော့ သီချင်းဆိုတာကိုဝါသနာပါတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ယောက် မိခင်ကသမီးဖြစ်သူရဲ့  ဝါသနာကိုအားပေးသော်လည်း ဖခင်ဖြစ်သူကမိန်းကလေးအရွယ်ရောက်ရင် ပညာတက်စရာလည်း မလိုဘူး ပိုက်ဆံရှာစရာလည်း မလိုဘူး ဘာဝါသနာကိုမှလည်း အားပေးစရာမလိုဘူး ယောက်ကျားပေးစားလိုက်ရင် ပြီးရောဆိုတဲ့ စိတ်ထားမျိုးနဲ့ သမီးဖြစ်သူကို ဆက်ဆံပြောဆိုလာတဲ့ အခါ သူတို့ ရဲ့မိသားစုသုံးယောက်ကြားပြဿနာတွေကဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမှာလဲ ? သီချင်းဆိုတာကိုဝါသပါတဲ့ ဆယ်ကော်ျသက်ကောင်မလေးကရော ဖခင်လုပ်သူတားမြစ်နေတဲ့ ကြားကနေသူ့ရဲ့ ဝါသနာတွေကိုဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်သွားမလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ရှုရင်း စိတ်ခွန်အားတစ်ခု ကိုရရှိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဖခင်ဖြစ်တဲ့သူက နပန်းသမားဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အတွက်တနေ့ကျလို့သားတွေမွေးလာတဲ့ အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကလေးတွေကို နပန်းသင်ပေးပြီးတော့ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ကလေးတွေဖြစ်အောင်သင်ကြားပေမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မိန်းမ.ူပြီးကတည်းက ကလေးတွေတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်မွေးလာလိုက်တာ မိန်းကလေးတွေချည်းပဲ သားယောက်ကျားလေးမပါတဲ့ အတွက်စိတ်ဓါတ်တွေကျလာတဲ့ ဖခင်တစ်ဦး အဖြစ် မင်းသားအမရာခမ်း ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
တနေ့မှာတော့မွေးထားတဲ့ သမီးတွေထဲ ကနှစ်ယောက်က ကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်းယောက်ကျားလေးတွေကစကြလို့ ပညာပြန်ပေးလိုက်တာ ယောက်ကျားလေးမိဘတွေကသူတို့သားတွေဒါဏ်ရာတွေရကုန်ကြတဲ့ အတွက် ဖခင်ဖြစ်သူ ကိုလာတိုင်ကြတော့ ဖခင်ဖြစ်သူက ဘယ်လိုတွေ သဘောကျပြီးသမီးမိန်းကလေးတွေကို ဘာတွေသင်ပေးတော့မလဲ ဆိုတာစိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သားမမွေးထားပေမယ့်လည်း အဖေသွေားပါတဲ့ သမီးတွေကို နပန်းပညာတွေသင်ပေးမှာလားဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားသူတွေဒီဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေဖြစ်တဲ့ သမီးတွေကရော ဖခင်ရဲ့ သင်ကြားမှုတွေကို လိုက်နာနိုင်ကြပါ့မလား ။ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင်ဖို့ အတွက်ရောဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ။
ဒီဇာတ်ကားကတော့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးကြီးသျှရီဒေဝီ ရဲ့  ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားထဲမှာ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်နေ့တစ်နေ့ အိမ်ထောင်တာဝန်တွေကိုပဲ ထမ်းဆောင်နေတဲ့ အခါ ကိုယ့်အတွက်အချိန်တောင်မပေးနိုင်လို့ အင်္ဂလိပ်စကားကိုကောင်းကောင်းမပြောတက်တော့ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့ လင်ယောက်ကျား ကနှိမ်သလို နိုင်ငံခြားကျောင်းတက်နေကြတဲ့ သမီးကပါနှိမ်လာတဲ့ အတွက် အင်္ဂလိပ်စကားကိုလင်ယောက်ကျားမသိအောင် ခိုးပြီးတော့ သင်ယူတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကတော့ မိခင်စိတ်ဓါတ်အပြည့်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လင်ပါသမီးလေးကို စော်ကားသွားတဲ့ ယောက်ကျားတွေကို ရဲကသက်သေမရှိလို့ ပြန်လွှတ်လိုက်ပေမယ့်လည်း ဒီအမှုတစ်ခုလုံးကို မိန်းမသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုတွေဖြေရှင်းသွားမှာလဲ …
ရန်သူတွေဟာ ရဲလက်ကနေလွတ်ပေမယ့် လည်း သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူအတွက် ဘယ်လိုတွေပြန်လည်တုန့်ပြန်သွားမလဲ ဆိုတာစိတ်ဝင်စား စရာကောင်းလွန်းလှပါတယ်။ မိခင်စိတ်စိတ်ရှိတဲ့ မိန်းမတွေဟာသူ့တို့ရဲ့ရင်သွေးလို့သတ်မှတ်ထားပြီဆိုရင် အဲ့လိုလူတွေအတွက် လူတောင်သတ်ရဲတယ်ဆိုတာကို ဒီဇာတ်ကားကြည့်ရင်းနဲ့လည်း သိရှိနိုင်ပါတယ်။
အမြိုးသမီးမြားအတှကျ စိတျခှနျအားတှရေရှိစနေိုငျမယျ့ အိန်ဒိယဇာတျကား၎ကား
မိနျးကလေးတှေ အတှကျစိတျခှနျအားတှကေိုရရှိစနေိုငျမယျ့ အိန်ဒိယဇာတျကား ၄ ကားကိုဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ ဇာတျကားတဈခုစီအလိုကျပေးခငျြတဲ့ ဘဝသငျခနျးစားတှအေရမျးကောငျးတာမို့ ရုံးပိတျရကျလိုအားလပျရကျတှမှော ကွညျ့သငျ့တဲ့ဇာတျကားတှလေညျးဖွဈပါတယျ။ မိနျးကလေးတှမှော ကိုယျပိုငျအရညျခငျြးတှတေဈယောကျတဈမြိုးရှိတကျပမေယျ့လညျး ဒီလိုအရာတှဟော တိမျမွုပျနတေကျပါတယျ။ ဒါတှကေိုဖျောဆောငျဖို့အတှကျ က ပတျဝနျးကငျြရဲ့တှနျးအားတဈခုလို သလိုအခကျအခဲတှတှေလေ့ာမှ ပျေါလာတကျတာတှဖွေဈတဲ့ အတှကျ ဒီလိုဇာတျကားတှကေိုကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ ကိုယျ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျအရညျအခငျြးတှကေို ဘယျလိုတှေ အသုံးခသြငျ့သလဲ ဆိုတာကိုလလေ့ာတှရှေိ့နိုငျပါတယျ။ ကှယျလှနျသှားရှာပွီဖွဈတဲ့ မငျးသမီးကွီးသြှရီဒဝေီ ရဲ့ အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့ ဇာတျကားနှဈကားပါဝငျပါတယျ။
ဒီဇာတျကားကတော့ သီခငျြးဆိုတာကိုဝါသနာပါတဲ့ ဆယျကြျောသကျမိနျးကလေးတဈယောကျ မိခငျကသမီးဖွဈသူရဲ့ ဝါသနာကိုအားပေးသျောလညျး ဖခငျဖွဈသူကမိနျးကလေးအရှယျရောကျရငျ ပညာတကျစရာလညျး မလိုဘူး ပိုကျဆံရှာစရာလညျး မလိုဘူး ဘာဝါသနာကိုမှလညျး အားပေးစရာမလိုဘူး ယောကျကြားပေးစားလိုကျရငျ ပွီးရောဆိုတဲ့ စိတျထားမြိုးနဲ့ သမီးဖွဈသူကို ဆကျဆံပွောဆိုလာတဲ့ အခါ သူတို့ ရဲ့မိသားစုသုံးယောကျကွားပွဿနာတှကေဘယျလိုတှဖွေဈလာမှာလဲ ? သီခငျြးဆိုတာကိုဝါသပါတဲ့ ဆယျကြေျာသကျကောငျမလေးကရော ဖခငျလုပျသူတားမွဈနတေဲ့ ကွားကနသေူ့ရဲ့ဝါသနာတှကေိုဘယျလိုအကောငျအထညျဖျောသှားမလဲ ဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါ။ ဒါကွောငျ့ ဒီဇာတျကားလေးကိုကွညျ့ရှုရငျး စိတျခှနျအားတဈခု ကိုရရှိကွလိမျ့မယျလို့ထငျပါတယျ။
ဖခငျဖွဈတဲ့သူက နပနျးသမားဖွဈခဲ့ဖူးတဲ့ အတှကျတနကေ့လြို့သားတှမှေေးလာတဲ့ အခါမှာသူကိုယျတိုငျကလေးတှကေို နပနျးသငျပေးပွီးတော့ နိုငျငံဂုဏျဆောငျနိုငျတဲ့ ကလေးတှဖွေဈအောငျသငျကွားပမေယျဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ မိနျးမ.ူပွီးကတညျးက ကလေးတှတေဈယောကျပွီးတဈယောကျမှေးလာလိုကျတာ မိနျးကလေးတှခေညျြးပဲ သားယောကျကြားလေးမပါတဲ့ အတှကျစိတျဓါတျတှကေလြာတဲ့ ဖခငျတဈဦး အဖွဈ မငျးသားအမရာခမျး ကပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။
တနမှေ့ာတော့မှေးထားတဲ့ သမီးတှထေဲ ကနှဈယောကျက ကြောငျးမှာ သူငယျခငျြးယောကျကြားလေးတှကေစကွလို့ ပညာပွနျပေးလိုကျတာ ယောကျကြားလေးမိဘတှကေသူတို့သားတှဒေါဏျရာတှရေကုနျကွတဲ့ အတှကျ ဖခငျဖွဈသူ ကိုလာတိုငျကွတော့ ဖခငျဖွဈသူက ဘယျလိုတှေ သဘောကပြွီးသမီးမိနျးကလေးတှကေို ဘာတှသေငျပေးတော့မလဲ ဆိုတာစိတျဝငျစားကွမယျလို့ထငျပါတယျ။ သားမမှေးထားပမေယျ့လညျး အဖသှေေားပါတဲ့ သမီးတှကေို နပနျးပညာတှသေငျပေးမှာလားဆိုတာကို စိတျဝငျစားသူတှဒေီဇာတျကားလေးကိုကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ မိနျးကလေးတှဖွေဈတဲ့ သမီးတှကေရော ဖခငျရဲ့သငျကွားမှုတှကေို လိုကျနာနိုငျကွပါ့မလား ။ နိုငျငံဂုဏျဆောငျဖို့ အတှကျရောဖွဈနိုငျပါ့မလားဆိုတာ။
ဒီဇာတျကားကတော့ကှယျလှနျသှားပွီဖွဈတဲ့ မငျးသမီးကွီးသြှရီဒဝေီ ရဲ့ ဇာတျကားပဲဖွဈပါတယျ။ ဇာတျကားထဲမှာ အိမျထောငျရှငျအမြိုးသမီးတဈယောကျအနနေဲ့ တဈနတေ့ဈနေ့ အိမျထောငျတာဝနျတှကေိုပဲ ထမျးဆောငျနတေဲ့ အခါ ကိုယျ့အတှကျအခြိနျတောငျမပေးနိုငျလို့ အင်ျဂလိပျစကားကိုကောငျးကောငျးမပွောတကျတော့ ပိုကျဆံရှာနိုငျတဲ့ လငျယောကျကြား ကနှိမျသလို နိုငျငံခွားကြောငျးတကျနကွေတဲ့ သမီးကပါနှိမျလာတဲ့ အတှကျ အင်ျဂလိပျစကားကိုလငျယောကျကြားမသိအောငျ ခိုးပွီးတော့ သငျယူတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျအကွောငျးကို ရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျကားပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီဇာတျကားကတော့ မိခငျစိတျဓါတျအပွညျ့ရှိတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျအကွောငျးကို ရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။ လငျပါသမီးလေးကို စျောကားသှားတဲ့ ယောကျကြားတှကေို ရဲကသကျသမေရှိလို့ ပွနျလှတျလိုကျပမေယျ့လညျး ဒီအမှုတဈခုလုံးကို မိနျးမသားတဈယောကျအနနေဲ့ ဘယျလိုတှဖွေရှေငျးသှားမှာလဲ …
ရနျသူတှဟော ရဲလကျကနလှေတျပမေယျ့ လညျး သူ့ရဲ့သမီးဖွဈသူအတှကျ ဘယျလိုတှပွေနျလညျတုနျ့ပွနျသှားမလဲ ဆိုတာစိတျဝငျစား စရာကောငျးလှနျးလှပါတယျ။ မိခငျစိတျစိတျရှိတဲ့ မိနျးမတှဟောသူ့တို့ရဲ့ရငျသှေးလို့သတျမှတျထားပွီဆိုရငျ အဲ့လိုလူတှအေတှကျ လူတောငျသတျရဲတယျဆိုတာကို ဒီဇာတျကားကွညျ့ရငျးနဲ့လညျး သိရှိနိုငျပါတယျ။